မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု
@ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ;
ကိုချစ်စ/ဆရာ က .. အဘပုကို အတော်ချစ်တာပဲနော် …
ဟိုက ထန်းတောထဲဝင်သွားလို့ ငြိမ်နေတာ ….
@ ကိုထူးဆန်း ;
အင်းလေ .. ခေါ်စရာလား ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ဘဘဘလက်လို့
@ မောင်ပေ ;
ချာတူးရယ် .. နီတော်တော် မျက်နှာပြောင်ပါလား .. ဒီနေ့တစ်နေ့ လုံး .. ဒီကော့မန့် ဖတ်ပြီးမှပဲ .. ၀ါးလုံးကွဲ ထရယ်မိတာ .. အမှတ်တရပါပဲ …
ဒါနဲ့ … ဟာသရေးပါလားချာတူးလေး.. ဟိဟိ
ကိုရွှေတိုက်ပြောတာ .. ၄၂ နှစ် က ဘာ ဆိုလား .. အဟဲ .. အရင်ကတည်းက ဘဘ ဘလက်ဆိုရေးထားတာလေး နှုတ်ကျိုးနေလို့ပါ … :grin:
စကြည့်ပြီး မှ အရည်အချင်းမမှီမှာ စိုးလို့ ကြိုပြောထားတာပါ .. ကွဲကုန်ကြပြီလို့ထင်တာ မျိုး မမြင်အောင် ကြိုပြောထားတာပါ ခင်ဗျ ….
မှန်ပါတယ် ကို ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) ရေ
ကျွန်တော် ဒီည ပို့ စ်တစ်ခုတင်ပြီး ပြန်ရှင်းပါမယ်
ရွာသူားအချင်းချင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်ဆံ ခဲ့ကြတာပါ
မင်းက အသစ်မို့ ငါက အရင်ရောက်လို့ ဆိုတာမျိုးလဲ မရှိခဲ့ပါဘူး
( စာကို လက်လွတ်စပယ်ရေးနေတဲ့သူတွေဟာလည်း
ရွေးချယ်ထားတာတွေကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ နောက်ထပ် လူကြီးပိုင်းလေးတွေလည်း ရှိဦးမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်။ လေးဖက်တီးတစ်ယောက်တော့ မပေါ်လာ အတော်ကြာနေပြီနော်။ အားလုံး သတိများ ရကြသေးရဲ့လားဟင်… နည်းနည်းလောက် စုံစမ်းကြည့်ပါဦး။ ဘယ်တွေများ ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါရှင်။ ဒါနဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူ ရွေးချယ်ထားတယ်လည်းဆိုသေးတယ် ဦးဦးဘဘအဘိုးလေး အင်ဇာဂီတစ်ယောက်လည်း ပါနေပါလားနော်။ ….
sitee စည်းကမ်းအတိုင်းသာ အတိအကျ လုပ်ခဲ့ရင်
အှုးပေ .. အူးပေ .. ဘောခန့်မှန်းတာတွေ မှန်ပေမဲ့ .ဒီတခါတော့ မှားပြီလား မသိ .. :grin: :grin: တစ်ခုခုတော့ လွဲနေသလားလို့ .. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြပါလား အှုးပေရယ် .. ကျွန်တော်တို့ သိသင့်လို့ ပြင်သင့်တယ် ထင်ရင်လည်း ပြင်ရတာပေါ့ ..
ဦးပေ ဘယ်လိုများတွေးမိလို့လဲ .. ဦးပေစိတ်ထဲ ရှိတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါ ဦပေရဲ့။
အတိုင်းရေးချင်သလိုရေးကြပြီး အဲ့ဒီ့ အထဲကမှ အကြိုက်ဆုံး တွေရွေးပြီး ပေးမှာ ဟုတ်ဘူးလား …အများစုရဲ့ အကြိုက်ရွေးလို့ မရလို့လား ..
မရှင်းတော့ဘူးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ .. ရင်ဘတ်ကြီးထဲရှိတာတွေ ပြောပစ်လိုက်စမ်းပါ..
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး နဲ့ မန္တလေးဂေဇက်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့အောင် ကြိုးစားကြရအောင်ပါ… :grin: :grin:
(ဒီနေ့ July7ဆိုတော့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ပြောတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါးအုတ်မြစ်ချကြတာပေါ့ ဆိုတာလေးကို ကူးတာပါ ။ )
ကိုချောရေ……. စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဖို့ ကော အစီအစဉ်မရှိဘူးလား…။
av;bvuf uAsmawGudka&m a&G;cs,fzdkU pdul;r&Sdbl;vm; qdkwmodyg&ap…/ cifrif;aom tm*
ဦးဘလက်အစီအစဉ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာရေးနေရင်းကနေ ပရိုတန်းဝင်သွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးသလိုပါပဲ။
Ko Black Chaw Yay,
ကွန်မန့် အဟောင်း ဆက်ရှင် ကို ခွဲလိုက် ပြီး နောက်ပိုင်း အဲဒီလို ဖြစ်သွားသလား မသိ။
ဆိုက်သိပ်လေးနေလို့ တမင်ဖြုတ်ထားတာပါ။ ဝိတ်တတ်နိုင်သလောက် လျှော့နေပုံရတယ်။ သဂျီးလည်း ပြောထားတယ်လေ ဂုတလော မသမာသူတွေရဲ့ အတိုက်အခိုက် ခံနေရတယ်လို့…။ သဂျီး မက္ကာမြို့က ပြန်လာပြီးခထဲက ဖြစ်နေတာ….
ကောင်းတာကို မြှင့်တင်ပေးကြဖို့ ဖြစ်တာမို့ အကျိုးများဖို့ပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဆုရွေးချယ်ပေးရအောင် ဘယ်လောက်များတော်နေ တတ်နေလို့လဲလို့ စဉ်းစားမိပြီး နောက်ကျော မလုံပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော်က ရှေ့ကော နောက်ကော မလုံတာ.. ရေးသမျှတော်တော်များများကြိုက်နေတော့ နံကြားထောက်ရမလိုဖြစ်နေတယ် :razz:
ကိုချောက တစ်ရက် ကျွန်တော့်ဆီ ဖုံးဆက်တယ်
အဲ ကိုချော ကျွန်တော့်ကိုပြောတာ ခင်ဗျား ရွာကိုမချစ်ဘူးလား၊ ရွာအတွက် အကျိုးရှိအောင် တတ်နိုင်တဲ့ နေရာက မလုပ်ချင်ဘူးလား တဲ့ ထပ်ငြင်းလိုက်ရင် ရွာကိုမချစ်တဲ့သူကြီး ၊ ရွာကို အကျိုးမရှိစေချင်သူကြီး ဖြစ်မှာစိုးလို့ ထပ်မငြင်းရဲတာ့ဘူး